Lego Star Wars 75297 Resistance X-wing ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
24 / 02 / 2021 25 / 02 / 2021 Dimitri 1256 Views စာ0မှတ်ချက် 4+, 75235 X-wing Starfighter တုတ်ကျင်းပြေး, 75297 ခုခံ X-Wing, 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, Duplo, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, ခုခံ X-wing, reviews, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, စံနစ်, X- တောင်ပံ
Lego Star Wars 75297 ခုခံက X- တောင်ပံ ဒီလက်ရှိလှိုင်းလုံး၏နောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာ၏တစ်ခုတည်းသောကိုယ်စားပြုမှုသည် The Force Awakens ကဲ့သို့သောအရာများအားကျွန်ုပ်တို့အားစွန့်ခွာစေမည်လောသို့မဟုတ် The Last Jedi ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြိုဖျက်ရန်ကြိုးစားမည်လော။
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်အမှန်ပင်ဖြည့်ဆည်းပေးသည် - DUPLO ကိုနှစ်သက်သည့်မူကြိုကျောင်းသားများမှသည်များပြားလှသော 18+ စုံများထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်လူကြီးများအထိလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်။ 4+ အကွာအဝေးသည် DUPLO နှင့် System အုတ်များအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးပြီးပရိသတ်များထဲမှအငယ်ဆုံးသောသူများကိုအတွေ့အကြုံရစေသည် Lego ပိုကြီးတဲ့ p ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တည်ဆောက်မှုကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်မှာမလွယ်ကူပါarts နှင့်နည်းပါးလာခြေလှမ်းများ။
ဤအအစုံယခင်က '' အောက်မှာကျဆင်းခဲ့သည်Lego Juniors '' ထီး, ဒါပေမယ့်မှအမှတ်အသားခဲ့ကြသည် Lego 4+ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် - ထိုတံဆိပ်အသစ်နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးလာ၏ Lego Star Wars အပါအဝင်ဒီ entry ကိုအမှတ်မှာဒီဇိုင်းအစုံ 75235 X-wing Starfighter တုတ်ကျင်းပြေး.
နှစ်နှစ်အကြာတွင်ငယ်ရွယ် Lego ယခုပရိသတ်များသည်ဖိုး Dameron's Resistance တိုက်လေယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းကြယ်နှစ်လုံးတိုက်လေယာဉ်မှူးနှစ် ဦး ၏အရောင်များ မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲမှုများစွာမရှိခဲ့ပါ - ဒီဇိုင်းများသည်တူညီကြသည်။
သို့သော်၎င်းသည်သေချာပေါက်ဆိုးရွားသည့်အရာမဟုတ်ပါ - X-wing အဟောင်းကို ၀ ယ်ခဲ့သော (သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့် ၀ ယ်ယူခဲ့သော) ပရိသတ်များသည်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစက်များသို့ပြောင်းရွှေ့သွားလိမ့်မည်။ ယခုအသစ်သောလူငယ်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ X- တောင်ပံ။ ဒါကိုဘယ်လိုစုပုံလိုက်လဲကြည့်ရအောင်။
theme: Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75297 ခုခံ X-Wing ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 60 အသေးစားပုံများ: 2
4+ အစုတစ်ခုတွင်ပုံမှန် System model များထက်အများကြီးပိုကြီးသောအပိုင်းအစများပါဝင်သည်။ စတစ်ကာများလည်းမပါရှိ။ အသေးစိတ်အားလုံးပုံနှိပ်ထားသော p မှလာသည်။arts ။ ၎င်းသည်သက်ကြီးပရိသတ်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်၊ သို့သော်သတ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုမော်ဒယ်ပြီးမြောက်ခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာတွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ယာဉ်ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို undercarriage အတွက်ကြီးမားသောအပိုင်းတစ်ခု၊ တောင်စောင်းလေးခုနှင့်နှာခေါင်းတစ်ချောင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
လေယာဉ်မှူးသည် Poe အတွင်း၌ထိုင်ရန်လုံလောက်ရုံမျှမကသူ၏ထိန်းချုပ်မှုများကိုပုံနှိပ် 1x2 slope တစ်ခုတည်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မကြာသေးမီကကဲ့သို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-wing တိုက်လေယာဉ်။ Luke ရဲ့ကြီးမားတဲ့ X-wing နဲ့မတူဘဲ Poe ဟာလဲလျောင်းနေမယ့်အစားဒီ kabpit မှာထိုင်နိုင်ပါတယ်။ 4+ အတွက်တစ်ခုရမှတ်။
အဆိုပါမြတ်သောတစ်ခုတည်းသောပွင့်လင်းအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်ထိပ်မှ clips နှင့် Poe အတွင်းပိုင်းခွင့်ပြုပါရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အနီးကပ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းမရှိသလောက်နည်းနည်းထူးဆန်းသော်လည်းကြည့်ရသည်မှာအလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးလျှော့ချထားသောအာကာသယာဉ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ BB-8 သည်နောက်ကျောတွင်2×2Jumper ပေါ်တွင်ထိုင်။ ၎င်းသည်ဤသင်္ဘောနှင့်၎င်း၏ယခင်ပုံစံ၏ကွဲပြားခြားနားချက်နှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တောင်ပံများအားလုံးသည်တူညီသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုကြသောကြောင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်ဆပ်assemblyရိယာတစ်ခုတည်းကိုလေးကြိမ်လိုအပ်သည်။ နောက်တဖန်သူတို့သည်ရိုးရှင်းသော p ကိုအသုံးပြုပါartယင်းသည်ယခင်အဟောင်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သော်လည်းအင်ဂျင်ကိုကိုယ်စားပြုရန်ဘီးမုတ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီးအတော်အတန်တိကျသည်။ တောင်ပံလေးခုစလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမသက်ဆိုင်ဘဲပတ္တာပြားများမှတဆင့်အဓိကယာဉ်ကိုယ်ထည်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအတိုင်းအတာအရ s-foil ယန္တရားအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
X-wing သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်သာအနားယူနိုင်သည့်အတွက်တောင်ပံများကိုအတူတကွပိတ်ထားသည့်အခါကောင်းမွန်သောဆင်းသက်ရေးဂီတမရှိပါ စားပွဲပေါ်နှင့်မော်ဒယ်တစ်ခုလုံးကိုထောကျပံ့။
ခြုံငုံဒီဇိုင်းသည်အနည်းငယ်ထိခိုက်ပြီးလွဲချော်သည်။ ရှေ့နှင့်နောက်ဖက်မှ X-wing ၏မမှားယွင်းသောအသွင်အပြင်ကိုသေချာစွာဖမ်းယူနိုင်ပြီးဘေးဘက်မှကြည့်လျှင်အဆင်ပြေလွန်း။ ၊ ၎င်းသည်ကြယ်ငါးပွင့်အားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအလွန်အငယ်စားကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောဒီဇိုင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးအဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်မလွဲမရှောင်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
Pif Dameron နှင့် BB-8 တို့မှအသေးစားဓာတ်ပုံနှစ်ခုပါဝင်သည်။ ပိုကြီးမားသော 2016 Resistance X-wing တိုက်လေယာဉ်တွင်တွေ့ရသော 75149 မူကွဲနှင့်မပြောင်းလဲပါ။ သူ၏အသေးစိတ်ကိုယ်ထည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပုံသွင်းသံခမောက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းက ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ သို့သော်ခြေထောက်များကိုမူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ BB-8 သည် 2019 ၏ပိုမိုကြီးမားသော receptor အမျိုးအစားနှင့်လည်းမပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်။
ယခင်အတွက် Star Wars များသောအားဖြင့် X-wing သို့မဟုတ် Snowspeeder ကဲ့သို့အဓိကမော်တော်ယာဉ်များရှိပြီးအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ရှုခင်းrepresentsရိယာအနည်းငယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောသေးငယ်သည့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုရှိသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆိုးတဲ့သူလည်းရှိတယ်၊ တစ်ခုကလိုအပ်တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကစားစေနိုင်တယ်။ ၇၅၁၄၄ Snowspeeder လေယာဉ်မှူး၊ snowtrooper နှင့် Echo Base ၏ကိုယ်စားပြုမှုတို့ပါ ၀ င်သည် 75297 ခုခံက X- တောင်ပံ.
ဒါပေမဲ့ဒီမှာ X-wing ပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောလက်ဖြင့်ပင်လျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Poe နှင့် BB-8 သည်စွန့်စားမှုများစွာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရုံဖြင့်လူအနည်းငယ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ideas အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီမှအသေးစားရုပ်ပုံများထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အီးမရှိခြင်းကြောင့် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်xtras ကိုစျေးနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။
ဒါကြောင့်ရပ်တည်သကဲ့သို့, ဒီကျိန်းသေသင်ရသောအရာကိုအဘို့အစျေးကြီးလွန်းသည်။ ပိုကြီးတဲ့အပိုင်းအစတွေဟာထုတ်လုပ်ဖို့အကုန်အကျများတယ်၊arts ကလည်းစျေးနှုန်းတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဒီအသက်အရွယ်အကွာအဝေးရှိအခြားအလားတူအစုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, စျေးနှုန်း tag ကိုခိုင်လုံသောဖြစ်စေမလုံလောကျ။ ဒါဟာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာပင်ပုံရသည်, \_ t Star Wars ပရိတ်သတ်တွေချောင်းကို၏ကုန်ကြမ်းအဆုံးရ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်များအတွက် 75297 ခုခံက X- တောင်ပံ တစ်ချက်ချင်း pass ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးတည်ဆောက်မှုမှာအလွန်မြန်လွန်းပြီးအချောသတ်ပုံစံသည်အခြေခံကျပြီးကလေးကဲ့သို့ပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အငယ်ဆုံးသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည် Lego လက်သမားနှင့်ကြောင်း dep ၌တည်၏artဒါဟာဆက်ဆက်အောင်မြင် ment ။ တည်ဆောက်မှုသည်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောစိတ်ကိုဖျော်ဖြေရန်အတွက်လုံလောက်သည်။ အဆိုပါပုံနှိပ် partကောင်းသောအသေးစိတ်အချို့နှင့် s-foils များသည်ဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်သည် model ၏ play value ကိုထပ်တိုးသည်။
တဖကျတှငျကကြောင်းလေးစားဖွယ်ပါပဲ Lego Group သည်ဤအစုံကိုစိတ်ထဲစွဲမြဲဆုံးပရိသတ်များနှင့်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲသည် 75297 ခုခံက X- တောင်ပံမိဘများအဘို့စျေးနှုန်းအနည်းငယ် off- ချပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်စျေးနှုန်းကျဆင်းရန်စောင့်ဆိုင်းရန် (သို့မဟုတ် RRP ကိုစုပ်ယူရန်) ပြင်ဆင်ထားပါက၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာသို့နိဒါန်းပျိုးသည်။ Lego DUPLO မှကြီးထွားလာနေသောကလေးများအတွက်စနစ်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ကောက်နေခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးအစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← လာမည့် LEGO x Adidas စုဆောင်းမှုကိုမှုတ်သွင်းထားသည် DOTS နှင့် NINJAGO
Star Warsဖြေ - မကောင်းတဲ့အသုတ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာမယ် Disneyမေလ ၄ ရက်နေ့ →